यस्तो छ अर्गानिक खानाको फाईदा - Filmy Hotline
यस्तो छ अर्गानिक खानाको फाईदा
आजभोली अर्गानिक खानान पाउन निकै गाह्रो छ । हरेक कुरामा मिसावट हुन्छ, अर्गानिक खेतीमा धेरै नै रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगले तरकारी तथा खाद्यान्न उत्पादन शुद्ध पाईन्दैन । रासायनिक मल र विषादीले हाम्रो स्वास्थ्यमा बिस्तारै एकदम नराम्रो असर गरिरहेको हुन्छ । पूर्णरुपमा अर्गानिक खाना हाम्रो जिवनमा प्रयोग नहुँदा हामी गम्भिर रोगका शिकार हुन पुग्छौँ ।
अर्गानिकमा के हुन्छ?
अर्गानिक हुनका लागि अर्गानिक बालीले संयुक्त राज्यको कृषि विभागले कायम गरेको मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ। यी मापदण्डमा सबै बालीहरू सिन्थेटिक कीटनाशक, कृत्रिम मल, विकिरण र बायोटेक्नोलोजीको प्रयोग नगरी उत्पादन गरिएको हुनुपर्छ।
अर्कोतर्फ, एन्टिबायोटिक वा सिन्थेटिक वृद्धि हर्मोनको प्रयोग नगरी जनावर हुर्काइएमा पशुजन्य उत्पादनहरू अर्गानिक मानिन्छन्। यी पशुहरू बन्द ठाउँमा नभई बाहिरी खुला स्थानमा चराइएको हुनुपर्छ।
उत्तम अर्गानिक फलफूलहरू
केही स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूले अर्गानिक तरिकाले उब्जाइएका अन्न र पशुहरू रसायन भएका बाली वा मासुभन्दा राम्रो उत्पादन हुने विश्वास गर्छन्। केही खानेकुराहरू अर्गानिक रूपमा किन्नुपर्दैन तर अरूका लागि भने तपाईंले अर्गानिक चिह्न लागेको खोज्नुपर्छ। यी उत्पादनहरूमा उच्च मात्रामा कीटनाशक विषादीको प्रयोग गरिएको हुन्छः
– स्याउ, अंगुर, स्टबेरी, आरु, साग, चेरी टमाटरहरू, आलु, आयातित केराउहरू, काँक्रो, गुलियो र पीरो मरिचहरू
यी उत्पादनहरूमा उच्च मात्रामा रसायन हुने भएकाले तपाईंले अर्गानिक हिसावले उत्पादन गरिएका बालीहरू किन्नुपर्छ। अर्कोतर्फ, यी फलफूल र तरकारीमा निकै कम मात्रामा कीटनाशक विषादी र रसायन हुन्छन्ः
प्याज, भुइँकटहर, अन्न, एभोकाडो, आँप, किवी, बन्दा, मेवा, केरा, काउली, ब्रोकाउली, खरबुजा
न्यून मात्रामा कीटनाशक विषादी रहेका फलफूल र तरकारीको विशेषता भनेको तिनीहरूको बोक्रा छुटाउन सकिन्छ। उत्पादन गरिएका यस्ता कुराहरूमा रसायनहरू भित्रैसम्म नजाने भएकाले तपाईंले राम्रो भाग पाउनका लागि फलफूल र तरकारीको बोक्रा निकाल्न सक्नुहुन्छ। राम्रो भाग रसायनसँग अलिकति पनि मिसिएको हुँदैन।
न्युन मात्रामा रसायन
बालीहरूमा रसायनको प्रयोग नभएकोले उत्पादनहरू अर्गानिक हुन्छन् र मासुमा रसायन मिसिएको हुँदैन। अध्ययनहरूले बालीमा प्रयोग भएका रसायनहरूले मेटाबोलिक समस्या, हर्मोनल समस्या र क्यान्सरजस्ता विभिन्न खालका स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हुन सक्छन्।
अर्गानिक रूपमा उत्पादन भएका बालीहरू र मासुहरू जेनेटिकल्ली मोडिफाइड अर्गानिज्म अर्थात् जीएमओबाट बनेका हुँदैनन्। जीएमओहरू खानेकुराको परिवर्तित रूप हुन्। यो प्रविधि भनेको अन्नको उत्पादन बढाउने र खानेकुराको अभाव हुनबाट जोगाउने हो। दुर्भाग्यवश, प्रविधी आफै व्यापक रुपमा बुझिएको छैन र यसबाट हुने स्वास्थ्य जोखिम पनि बुझिएको छैन। प्रकृतिमा प्राकृतिक रुपमा उत्पादन नभएको कुनै पनि कुरा खानका लागि सुरक्षित ठानिनु हुँदैन।
अर्गानिक रूपमा उत्पादन गरिएका फलफूल, तरकारी र मासुहरू पोषिलो हुने मात्र होइन, रसायनको कमीले गर्दा राम्रो गुणस्तरका पनि हुन्छन्। विभिन्न खाले हर्मोन र एन्टिबायोटिकको प्रयोग गरी हुर्काइएका पशुहरू अर्गानिक हिसाबले खुला रूपमा हुर्काइएका पशुहरूको तुलनामा धेरै तनावमा हुन्छन्। यसले मासुको गुणस्तरमा पनि निकै फरक पार्न सक्छ। यही कुरा अर्गानिक रूपमा उत्पादन गरिएका फलफूल र तरकारीमा पनि लागू हुन्छ।
अर्गानिक रूपमा उत्पादन गरिएका फलफूल, तरकारी र मासुजन्य उत्पादन वातावरणमैत्री पनि हुन्छन् किनभने ती खानेकुरा उत्पादन गर्न र वृद्धि गराउनका लागि कुनै पनि रसायनको प्रयोग गरिएको हुँदैन। कीटनाशक विषादी, हर्बिसाइड्स, र हर्मोनहरूले कृषि र वातावरणजन्य नोक्सानी हुने गरी नदी, माटो र हावालाई दूषित बनाउन सक्छन्।
Prevदीपाश्रीसहित विभिन्न स्रष्टा सम्मानित
Nextरोग लिएर फर्कन्छन् विदेशमा पैसा कमाउन गएका महिलाहरु ! कोहि उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पनि…
नेपालकै सबैभन्दा शक्तिशाली शिक्षिका – जसले विगत ४ वर्षदेखि स्कुलनै नगई तलब बुझ्दै आएकी छन् !
नेपाल पैसा पठाउन लाग्दै हुनुन्छ ? नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा आजको लागी जारी बिदेशी बिनिमय दर यस प्रकार रहेको छ अवस्य हेर्नुहोस |
पूर्वराजालाई हिँडडुल गर्न प्रतिबन्ध लगाइयोस् भन्दै माग गर्ने सांसद झपट रावल यी नै हुन् (भिडियोसहित)